मासुः खान जाने पोषण, नजाने रोगको घर !
7 Ashwin 2074 Saturday 4:48 pm प्रतिकृया दिनुहोस
नेपालीहरूको ठूलो चाड दसैँ सुरु भइसकेको छ । दसैँमा मासुका परिकार बढी खाने चलन छ । खान जान्दा मासु पोषण हो, तर खान नजाने रोगको घर । त्यसैले चाडबाडको नाममा जथाभावी मासु नखानुहोस् । ठिक्क खानुहोस्, स्वस्थकर मासु खानुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्:
-आमनेपालको बानी मासु स्वादका लागि खाने हो भन्ने नै छ । तर, स्वादका लागि मासु खाँदा स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे सोच्न सक्नुपर्छ । स्वादभन्दा स्वास्थ्यलाई बढी महत्व दिएर मासु खानुपर्छ ।
-स्वादका लागि मासु खाँदा शरीरमा विभिन्न रोग निम्तिने खतरा रहन्छ । स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर मासु खाए राम्रो फाइदा गर्छ । मासु पोसिलो खानेकुरा हो ।
-मासुमा प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज र पानीको मिश्रण हुन्छ । स्वस्थकर मासु स्वस्थ तरिकाले बनाएर खाए स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ । तर, यी पाटोमा ध्यान नदिए समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
-चाडबाडका वेला नेपाली भान्सामा मासुको प्रयोग बढी नै हुन्छ । त्यसैले माग पनि बढी हुन्छ । मासु व्यापारीले सरसफाइमा त्यति ध्यान दिँदैनन् । त्यसैले पहिलो नम्बरमा मासु खरिदमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बाटोमा जताततै राखिएका मासु खरिद नगर्नुहोस् ।
-सकेसम्म ब्वाइल्ड मासु खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । धेरै मसला, तेल हालेर पकाएको मासु खाँदा स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ । त्यसैले मासु थोरै–थोरै खानुपर्छ ।
-फ्रिजमा राखेको मासुले पनि असर गर्छ । फ्रिजमा धेरै दिन मासु राख्दा पोषण तत्वसमेत हराउँछ । हामीले २४ देखि ४८ घन्टासम्म फ्रिजमा राखेको मासु मात्र खानुपर्छ । बासी तथा धेरै दिन सामान्य फ्रिजमा राखेको मासुमा पोषण तत्व हराउँछ । त्यसैले एकैचोटि धेरै होइन, थोरै–थोरै किनेर खानु राम्रो हुन्छ ।
-जुनसुकै खानेकुरा पनि थोरै–थोरै गरेर दिनमा ४–५ चोटि खानुपर्छ । यो नियमित खाने तरिका नै हो । दसैँमा पनि रमाइलोको नाममा धेरै खानुहुँदैन ।
-बेलुकाको खाना सकेसम्म कम खानुपर्छ । राति धेरै खाँदा अपच हुने, कब्जियत निम्तिने तथा मोटोपन बढ्न सक्छ ।
-धेरै चिल्लो खानुहुँदैन । चिल्लो पिरोमा नियन्त्रण गर्नुहोस् । यसले ग्यास्ट्रिक हुने, प्रेसर बढ्ने, खाना अमन हुने, बान्ता हुने, पचाउन नसक्ने, फुड प्वाइजन हुनेजस्ता समस्या निम्त्याउँछ । खानामा कार्बोहाइड्रेड, भिटामिन, मिनरल्स, प्रोटिन सबै मिलाउनुपर्छ ।
जुम्ला : सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीलाई उपचारका लागि काठमाण्डौ ल्याउन सेनाको हेलिकप्टर जुम्ला पुगेपनि डा. केसी भने काठमाडौं आउन मानेका ...
‘एयर कन्डिशनर’ले गर्मी बढाइरहेको दाबी
कतार र साउदी अरेबियाबीच ‘अनलाइन’ युद्ध